Wariyaal diiday iney baaraan Eeyahada ay adeegsadaan ciidamada AMISOM – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wariyaal iyo sawir-qaadayaal ka howlgala Muqdisho ayaa maanta diiday iney baaraan eeyo ay adeegsadaan ciidamada AMISOM ee jooga albaabka hore ee laga galo xerada Xalane.
Warbaahinta ayaa loogu yeeray iney Xalane u tagaan shir jar’aaid oo halkaas maanta lagu qabanayey, hse ahaatee waxaa markii ay labaabka tageen loo sheegay iney iyaga iyo qalabkoodaba baarayaan eeyo tababaran oo ay leeyihiin ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM.
Wariyaasha ayaa arrintaan ka carrooday, iyagoo xusay in eeyaha baaritaanka sameynayey uu ka da’ayayey dhareer badan, qaarkoodna jirkoodu qoyna, sidaasna ay ku diideen iney jirkooda ama qalabkooda taabtaan.
Sawir-qaade u shaqeeya TV-ga Horn Cable oo lagu magacaabo Ismaaciil Alright ayaa sheegay iney aad uga xumaadeen iney baaritaan ku sameeyaan eeyo dhareerka ka daadanayo.
“Markii aan tagnay albaabka Xalane waxaa naloo sheegay in annaga iyo qalabkeenna ay na baarayaan eeyo ay leeyihiin ciidanka AMISOM, kuwaasoo afkooda dhareer ka da’ayayey, arrintaasna waan diidnay, waxaana dhahnay nagu baara Scan, waxeyna askartu nagu dhaheen eeyaha ayaa idin baaraya ama iska laabta, dib ayaana uga soo laabanayey” ayuu tiri Sawir-qaade Ismaaciil oo la hadlay Radio Mustaqbal.
Ciidanaka AMISOM ayaa marar badan baaritaannada u adeegsada eeyo tababaran, iyagoo inta badan eeyahaas keena wadada hormarta xerada Xalane oo aad degmada Wadajir.